Azonao atao izao ny maka scan ny antontan-taratasy ao amin'ny Evernote amin'ny telefaonanao | Androidsis
Evernote dia fampiharana izay efa lavitra ny dia ary izy io dia nanjary iray amin'ireo safidy tsara indrindra hanana karazana naoty voarindra miaraka amin'ireo asany manokana amin'ny alàlan'ny kahie sy ny labels. Ny birao dia nohavaozina vao haingana miaraka amin'ny fanampiana tsara hahafahana manova ny lokon'ny toetr'ireo toetra roa lehibe ho an'ny fikambanana.
Amin'ny fanavaozana farany an'i Evernote fanatsarana ny fakana sary. Ankehitriny dia misy fomba roa: ny iray manual ary ny iray mandeha ho azy. Ny automatique dia mamantatra ny haben'ny antontan-taratasy ary mihodina ary manova ny sary ho zavatra azontsika ampiasaina hizarana azy amin'ny alàlan'ny fampiharana hafa na amin'ny Evernote mihitsy. Ary koa, ireto sary notarafina ireto dia ho ampiana ao amin'ny galeriana.
Ny kinova Pro an'ny Evernote ho an'ny fandoavana isam-bolana (herintaona lasa izay dia nandefa drafitra hafa izy), manana ny safidinao ianao karatra bizina scanner izany no hiandraikitra ny famoahana ny vaovao ao. Aorian'ny nampidirana ireo sary dia manana safidy izahay mba hanampy zana-tsipìka, endrika na marika mihitsy aza. Rehefa manitsy ny iray amin'ireo naoty ireo dia azonao atao ny mamerina mamerina ilay lahatsoratra amin'ny alàlan'ny tonian-dahatsoratra izay nahazo zava-baovao noho ny iray hafa mahaliana.
Ampy fanatsarana hiaina tamin'ny fanontana
Fanohanana ny fomba fanoratana an-tsoratra
La ny fakantsary izao dia mamantatra sy misambotra mandeha ho azy ny karatra fandraharahana, antontan-taratasy, Post-its ary tapakila
Fahaizana manisy marika ny sary sy ny PDF
Select naoty marobe indray mandeha
Afaka foana ny fako
Toy ny amin'ny fanavaozana zava-dehibe rehetra, misy ihany koa ny fanitsiana ny bibikely sasany, toy ny amin'ity tranga ity amin'ireo izay hita rehefa manitsy naoty, izay mitarika amin'ny fanatsarana ny zava-bita ho an'ny fampiharana izay mitondra tena tsara amin'ny tranga sasany sy karazana mpampiasa amin'ny famoronana sy fitantanana karazana naoty rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Evernote dia misy safidy vaovao amin'ny scanning sy ny fanovana antontan-taratasy
Ny paosy dia lasa tambajotra sosialy miaraka amin'ny "tiany" ary mandefa indray